Wena ngempela usindiswe?
The grace amazing
Umsuka uSathane, the 'uyise wamanga'
Unkulunkulu kusindisa abantu zikhathi zonke, kodwa akekho kubo kungaba athathe ilungelo uvumelane im...
Izinkolo bafuna ukubonisa ukuthi umuntu uyisoni ngokusebenzisa izindaba zokuziphatha zomthetho, kodwa ibhayibheli libonisa ukuthi bonke baba izoni ngenxa icala single "Futhi lapho efika, yena uyokwenza ngecala izwe yesono, futhi ukulunga, nokwahlulelwa" (Johane 16: 8). Amakr...
Uma umuntu ongathembekile, Unkulunkulu uhlala ethembekile. Uma umuntu akathembeli ngeke athethelelwe ngeke, kodwa Unkulunkulu uhlala okuhle. Unkulunkulu akanakuziphika, Akashintshi. Kungenzeka kanjani lokhu? Unkulunkulu uhlala "okuhle" ngisho nalapho ejezisa transgressors? Yup! Ibhayibheli...
Uma uqonde ukuthi uSathane wazifunela isikhundla sikaNkulunkulu, imibuzo eminingi sithule. Kodwa uma wayeqonda ukuthi uSathane wafuna ukuba kufezeke efana uMninimandla onke, kuphakama imibuzo eminingi. Siyini efana uMninimandla onke? Yini efana uMninimandla onke wayengeke avumele ikherubi nesembozo ...
silandele ekuxhumaneni nomphakathi
IBhayibheli Online Writing
IBhayibheli Online Audio
ubhalisele newsletter yethu ukuthola izindaba
© 2017 Portal izifundo zeBhayibheli Onke amalungelo agodliwe proudly adalwe GaoE